Zimbabwe: In ka badan 900 xaaladood oo xadgudubyada galmada ayaa bil walba ka dhaca dalkaasi ' | shumis.net
Home » galmada » Zimbabwe: In ka badan 900 xaaladood oo xadgudubyada galmada ayaa bil walba ka dhaca dalkaasi '
Zimbabwe: In ka badan 900 xaaladood oo xadgudubyada galmada ayaa bil walba ka dhaca dalkaasi '
15 xaaladood oo xadgudubyada galmada ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen degmo kasta ee wadanka Zimbabwe halka kiisaska ugu badan ay yihiin carruurta daryeelka caafimaadka u baahan.
Xog uririnta ayaa waxa shaaca ka qaaday wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalka Aldrin Musiiwa maalintii isniinta caasimada Harare inta lagu jiray olole caalami ah oo ka dhan ah xeerarka xadgudubka galmada.
"Waxaa jira 63 degmo, taasoo la micno ah in bil kasta, 945 xaaladood oo cusub ay dhacaan.
waxa xusid mudan , tani ayaa ka gaar ah shanta isbitaalada gobolka, shanta isbitaalada dhexe iyo hay'adaha caafimaadka magaalada, "sida ay warbaahinta maxaliga News Day kasoo xigatay wasiir ku xigeenka caafimaadka kaa soo kula taliyey dhibanayaasha in ay soo sheegaan dhacdada 72 saacadood gudahood.
"Waxaa muhiim ah in marka kuwa ka badbaaday xadgudubka galmada ay marka hore tagaan goobaha caafimaadka , iyaga oo aan wargalin booliiska, waa in aan marnaba loo diidin in ay helaan daryeelka caafimaadka.
Tani waa danaha ugu wanaagsan ee caafimaadka qofka badbaaday ee ma aha in laga lumiyo waqtiga lagu taliyey ee 72 saac gudahood, "ayuu yiri.
Waxa uu carabka ku adkeeyay in wakhtiga 72 saacadood loo baahanyahay si ay uga caawiyaan oo loo yareeyo fursadaha uurka iyo qaadista HIV iyo STIs.
Aldrin Musiiwa ayaa kula taliyay tirada badan ee dhibbanayaasha, iyo kuwo kale, in kor loo qaado wacyi galinta baahida loo qabo iyo in ay soo sheegaan dhacdooyinka.
Title: Zimbabwe: In ka badan 900 xaaladood oo xadgudubyada galmada ayaa bil walba ka dhaca dalkaasi '